Arsenal Oo Si Layaableh Loogula Taliyay In Ay Alexis Sanchez Ka Soo Ceshadaan Man United Kadib Jabkii Old Trafford Ku Soo Gaadhay. - Gool24.Net
Arsenal Oo Si Layaableh Loogula Taliyay In Ay Alexis Sanchez Ka Soo Ceshadaan Man United Kadib Jabkii Old Trafford Ku Soo Gaadhay.
May 28, 2019 Mahamoud Batalaale
Alexis Sanchez ayaan Man United ka helin wixii uu ka filayay markii uu ka baxay Arsenal wuxuuna hadda ku jiraa xaaladii ugu xumayd waayihiisa ciyaareed.
Laakiin Arsenal ayaa si layaableh loogula taliyay in ay Alexis Sanchez ka soo ceshadaan Man United kadib fashilkii xumaa ee uu Old Trafford kula soo kulmay.
Xidigii hore ee kooxda Arsenal ee Cameroonian Lauren ayaa aaminsan in haddii ay Gunners dib u soo ceshato Alexis Sanchez in uu dib u soo noolaynkaro waayihiisii ciyaareed ee Man United ku burburay.
Kadib markii uu diiday dalab kasta oo ay Arsenal heshiis cusub kaga saxiixan kartay ayuu Alexis Sanchez go’aan ku gaadhay in uu Man United ku biiro taas oo keentay in Gunners ay badalkiisa Man United uga heshay Henrikh Mkhitaryan.
Cameroonian Lauren ayaa yidhi: “Sanchez waa ciyaartoy heer sare ah, markastaba waxaa lagu soo dhawayn doonaa Arsenal. Haddii uu Unai Emery uu isaga maskax ahaan u soo celin karo, sababtoo ah waqti ayay ahayd oo uu isagu bilaa ciyaar soo ahaa, kadib xoojin fiican ayuu noqon karaa”.
“Waxay ku xidhan tahay haddii uu isagu yahay nooca ciyaaroyga ee uu Emery ugu raaxaysan karo in uu Arsenal ku haysto” ayuu Cameroonian Lauren hadalkiisa sii raaciyay.
Arsenal ayaa lala xidhiidhinayaa ciyaartoy badan oo magacyo waa wayn leh waxaana ka mid ah Samuel Umtiti, Kostas Manolas iyo Jerome Boateng oo ugu danbeeyay kaas oo lagu war galiyay in uu Bayern Munich ka bixi karo.
Lama oga haddii soo laabashada Alexis Sanchez ay Arsenal suurtogal u noqon karto maamulka kooxda Gunners kuwaas oo hore ugu soo fashilmay in ay la kulmaan mushaarkii qaaliga ahaa ee uu Sanchez doonayay.
Balse sidoo kale jamaahiirta Arsenal ayaa la filayaa in ay si buuxda ugu qaybsami karaan soo laabasho kasta oo uu Sanchez ku iman karo Emirates Stadium.